JUVENTUS VS AC MILAN: Ciyaartooyda labada koox u ciyaaraysa kulanka habeen dambe oo la magacaabay! – Gool FM
JUVENTUS VS AC MILAN: Ciyaartooyda labada koox u ciyaaraysa kulanka habeen dambe oo la magacaabay!
Raage January 24, 2017
(Torino) 24 Jan 2017 – Waxaa habeen dambe isku dheggan kooxaha Juventus vs AC Milan oo ciyaaraya nus-dhamaadka Coppa Italia, iyadoo ay labada kooxood iskugu dambaysay 23-kii bishii tagtay.
Kulankan ayaa ku qabsoomaya J Stadium oo ah garoonka kooxda Juve ee magaalada Torino, waxaana Juve ka maqan Gigi Buffon, Claudio Marchisio, Patrice Evra iyo Mario Lemina.
Gerard Deulofeu oo ah laacib haatan kusoo biiray kooxda AC Milan ayaa isna helay rukhsadda shaqada kaddib markii uu caafimaadka maray, wuxuuna diyaar u yahay kulankan iyadoo ay u badan tahay inuu kaydka kusoo bilowdo, waxaana Milan kasoo tagtay M’Baye Niang oo aanu mustaqbalkiisu meel saarrayn.
Hoos ka eeg labada kooxood oo magacaabay laacibiinta ciyaaraysa kulankan:
Kooxda Juventus ee AC Milan wajahaysa: Chiellini, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Higuain, Hernanes, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Mandzukic, Bonucci, Pjaca, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero, Del Favero, Muratore
Kooxda AC Milan ee Juventus u martiyaysa: Donnarumma, Plizzari, Storari, Abate, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata, Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa, Mati Fernandez, Bacca, Cutrone, Deulofeu, Lapadula, Suso
Liverpool oo wadahadalo heshiis kordhin ah la furtay Philippe Coutinho
GOOGOOSKA: SSC Napoli vs AC Fiorentina 1-0 (Napoli oo usoo baxday nus-dhamaadka Coppa Italia)